Chitosan (ချစ်တိုစံ) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဖက်ဝင် » Chitosan (ချစ်တိုစံ)
Chitosan (ချစ်တိုစံ) ကဘာလဲ။
ချစ်တိုစံ ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
ရေသတ္တဝါများဖြစ်သော ပုစွန်ဆိပ်၊ ကျောက်ပုစွန်၊ ဂဏန်း တို့မှာတွေ့ရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်တယ်။ မှို၊ တဆေး တို့မှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ Chitosan ဟာ chitin ရဲ့ဓါတုဗေဒပုံစံဖြစ်တယ်။
အဝလွန်ခြင်း၊ ကိုလက်စရော(cholesterol) များခြင်း၊ Crohn’s ရောဂါများအတွက်သုံးတယ်။ သွေးတွင်း cholesterol များခြင်း၊ သွေးအားနည်းခြင်း၊ အားမရှိခြင်း၊ စားချင်စိတ်နည်းခြင်း၊ အိပ်မပျော်ခြင်း တို့ကဲ့သို့ ကျောက်ကပ်ဆေးရသော လူနာများကြုံရတတ်သည့် အခြေအနေတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်ပါသေးတယ်။
သွားဖုံးရောင်ခြင်းအတွက် သွားဖုံးကိုလိမ်းတတ်ကြသလို၊ သွားပိုးစားခြင်းကာကွယ်ရန် chitosan ပါသောပီကေများ စားတတ်ကြပါတယ်။
ထိုဆေးဖက်ဝင်ဖြည့်စွတ်စာလုပ်လုပ်ပုံနဲ့ပတ်သတ်လို့ လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် တိုင်းရင်းဆေးပင်ကျွမ်းကျင်သူနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ။် ဒါပေမယ့် ပရိုတင်းကိုစုပ်ယူပြီး အာရုံကြောဆဲလ်တွေကို ကပ်တွယ်နိုင်ကာ အာရုံကြောပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို အာပေးတာကိုတော့ လေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။
ချစ်တိုစံ အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
ချစ်တိုစံ က ဘယ်လောက်စိတ်ချရလဲ
လေ့လာမှုတွေမပေါ်သေးသ၍ Chitosan ကို ကလေး၊ ကိုယ်ဝန်သည်၊ နို့တိုက်မိခင်တို့မှာမသုံးရပါ။
ချစ်တိုစံ ကနေ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေကို ခံစားရနိုင်မလဲ
ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ လေပွခြင်း၊ ဝမ်းတွင်အဆီများပါခြင်း၊ ပိန်ခြင်း
ချစ်တိုစံ ကိုအသုံးပြုခြင်းကနေ ဘယ်လိုဓါတ်ပြုမှုတွေရှိလာနိုင်သလဲ
တစ်ရက် 2.4 g မှီဝဲပါက သွေးမခဲနိုင်သောအာနိသင်ရှိပါတယ်။
ချစ်တိုစံ အတွက် ပုံမှန်သောက်သုံးရန်အညွှန်းက ဘယ်လောက်လဲ
ချစ်တိုစံ က ဘယ်လိုပုံစံမျိုးတွေနဲ့လာလဲ
Skidmore-Roth, Linda. Mosby's Handbook Of Herbs & Natural Supplements. St. Louis, MO: Mosby, 2001. Print version. Page 175.
Chitosan. http://www.webmd.com/vitamins-supplements/ingredientmono-625-chitosan.aspx?activeingredientid=625&activeingredientname=chitosan. Assessed August 7, 2016.
Chitosan. http://www.drugs.com/npc/chitosan.html. Assessed August 7, 2016.